Waa Sidee xaalka Muslimiinta Muusil??!! – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Waa Sidee xaalka Muslimiinta Muusil??!!
On Jul 8, 2017 372 1
Xaalad murug iyo calool xumo ah ayaa ka jirta magaalada Muusil oo la kulmeysa xamlo daran oo ay kusoo qaadeen malleeshiyaadka Rawaafida oo kaashanaya kuwa Reer galbeedka.
Xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaalada Muusil ayaa ah mid ku murug gelineysa islamarkaana qalbigaada dhaqaajineysa, waxaana maalin kasta dhimanaya kumanaan ruux, duqeymo waali ah awgeed.
Mid kamid ah dadka ku sugan magaalada Muusil gaar ahaan xaafadda loo yaqaano Al-madiinatul Qadiima ayaa sheegay in todobadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen kudhowaad 1000 ruux, kadib duqeymo aan loo meel dayin oo lagu garaacay magaalada.
Wuxuu sheegay qofkan ku sugan magaalada oo si deg deg ah u hadlayay cabsina ka muujinayay in gantaal uu ku dhaco in dadka dhintay aaney jirin meel lagu aaso iyo qaab loo aaso, qubuurna looga dhigay burbruka guryaha.
Wuxuu sheegay in dadka badankood ay u dhinteen dhaawacyada kasoo gaaraya duqeymaha, maadama aysan jirin xarumo caafimaad oo dadka dhaawacma la tacaala, waxaana magaalada saran go’doon adag, iyadoona Rawaafida iyo Gaaladu isugu habar wacdeen.
Dadka dhaawacyada fud fudud qaba ayuu sheegay in iyaga qudhooda ay la dhintaan marka dambe nafaqo daro iyo daryeel la’aan caafimaad, isagoona sheegay in kumanaan ruux oo ku dhaqan xaafadda Al-Madiinatul Qadiima ay wajahayaan masiir majhuul ah, halisna ay ku jirto noloshooda.
Waxaa gebi ahaanba maqan oo aan faro lagu heynin biyaha, cuntada, iyo dawada, kuwaas oo ah muqawimaatka nolosha banii Aadamka.
Diyaaradaha Taxaalufka ayaa si indha la’aan ah u garaacaya xaafadaha shacabka Muslimiinta Suniyiinta ay ku noolyihiin, waxaana jira dagaallo ka socoda wadooyinka magaalada, kuwaas oo dhexmaraya Rawaafida kusoo duulay magaalada iyo dhalinyarada muslimiinta ee ka dhex dagaalamaya magaalada.
Xaalka Muslimiinta Muusil ayaa ah mid murugo badan, waxaana Muslimiinta laga rabaa iney Alle u baryaan jasadkooda ku dhiig baxaya Muusil wadanka Ciraaq.
Waa imtixaan, nasriga ilaahayna ma foga, adduunkuna qiimo ma leh ee Allaah ha u naxariisto inta dhimatay, kuwa noolna Allaah ha sugo. inta dhibic dhiig ahi nagu jirtana waa dagaallamaynaa.